Inkukhu eyosiwe enomdlandla we-curry nesinamoni | Ukupheka Kwekhishi
Inkukhu eyosiwe enomdlandla we-curry nesinamoni
Eminyakeni embalwa eyedlule, hhayi eminingi, ngangilinganiselwe ukusebenzisa upelepele, i-paprika, isinamoni, isafroni namanye amakhambi anamakha afana ne-oregano noma i-basil ekhishini. Namuhla, noma kunjalo, isikhala abahlala kuso sikhulu, nezitsha ezinjengalezi inkukhu ethosiwe ngokuthintwa kukakhari nesinamoni kunesikhala esithe xaxa etafuleni lami. Ingabe kwenzeka okufanayo nakuwe?
Izinongo azigcini ngokunika ukunambitheka ezitsheni zethu, futhi ziqinisa nephunga nombala wazo. Ngakho-ke nalesi sitshalo senkukhu. Iresiphi elula enesikhukhula semifino notamatisi ochotshoziwe njengesisekelo, esithola ubukhulu obusha nge ukuthinta i-curry nesinamoni.
Isinamoni, evame kakhulu ekuphekeni okumnandi, ngikuqinisekisile ukuthi kungumbimbi ophelele wokulungisa izitshulu zenyama ngokuthinta okuhlukile nokungajwayelekile. Ngabe uke wakuzama kulezi zinhlobo zokupheka? Ngiyakumema ukuba ukwenze. Zama le inkukhu eyosiwe ngelayisi noma umzala futhi uma inomhluzi omkhulu njengami, sebenzisa umhluzi osele ukwenza isobho ngama-noodle noma okunye amaqanda aphahlazekile.
Inkukhu ethosiwe ngokuthinta i-curry nesinamoni esiyilungiselela namuhla ine-aftertaste exotic. Ungayihlanganisa ne-, nomzala noma udali futhi uzoba ne-plate eyishumi.
1 inkukhu eqoshiwe ukupheka
2 amalikhi amancane, aqoshiwe
½ ingilazi yewayini elimhlophe (uma uthanda)
2 izingilazi zikatamatisi ochotshoziwe
Powder isipuni se-curry powder
Umhluzi wenkukhu noma amanzi
Simisa inkukhu futhi nsundu ku-casserole ngamafutha ashisayo. Uma sesiyigolide, siyayikhipha bese siyabeka.
Kumafutha afanayo (kungadingeka ungeze okunye) susa u-anyanisi, upelepele namalikhi aqoshiwe imizuzu eyi-10.
Ngemuva sifaka iwayini elimhlophe futhi siyayiyeka yehlise, cishe imizuzu emithathu.
Khona-ke sifaka izinongo uhlanganise bese ufaka utamatisi ochotshoziwe. Sipheka imizuzu emi-5.
Okulandelayo, sibuyisela inkukhu ku-casserole futhi engeza amanzi cishe ikhava inkukhu (ngiyidlulisile) Pheka imizuzu eyi-10-15 ukuze inkukhu iqede ukupheka.
Sikhonza inkukhu eshisiwe iyashisa, iyodwa noma ilayisi noma umzala.
Indlela ephelele ye-athikili: Inicio » Izitsha » Inyama Ungadliwa » Inkukhu eyosiwe enomdlandla we-curry nesinamoni
Ikhekhe lesiponji eliwolintshi